ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): भेटियो यस्तो गो’प्य प्र’मा’ण, को जाने भयो त जे’ल ? (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > अपराध > ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): भेटियो यस्तो गो’प्य प्र’मा’ण, को जाने भयो त जे’ल ? (हेर्नुस् भिडियो)
admin February 17, 2020 अपराध, समाज	0
गत सोमबार (माघ २७ गते) पूर्वसचिव कार्कीको सानेपास्थित निवासमा पत्नी मुना ग’म्भीर घा’इते अवस्थामा फे’ला परेकी थिइन्। यो ललितपुरको सानेपामा घ’टेको यो घ’टना अझै पनि रहस्यमय बनेको छ । यस घ’टनालाई लिएर धेरैको मनमा शंका उपशंका उब्जिएको र सबैको कौतोहलताको बिषय बनेको छ । यही बिषयमा आएको अपडेट अनुसार पूर्वसचिव कार्कीले ड्राईभरलाई गाडी चलाउन नदिएर आफैले गाडी चलाएर लानु आफैँमा संकास्पद छ।
यसरी आफैमा शंकास्पद भएको र शंकाको घेरो पूर्वसचिव कार्कीमाथि नै खनिएको छ। यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर सामाजिक अभियन्ता तथा निर्देशक हरि उदासीले पनि शंकाको सुई अर्जुन कार्कीतर्फ नै मोडिएको खुलासा गरेका छन् । घ’टना अझै पनि अन्योलमा रहेको भन्दै उदासीले गाडीको बिषयले थप शंका पैदा गरेको बताएका छन् । प्राप्त सिसिटिभी फुटेज र हिजो सार्वजनिक भएको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टका अनुसार पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको डोरीले घाँटी क’सेर ह’त्या गरेको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टबाट खुलेको छ।
पहिलो कुरा बेलुका तपाई सुत्ने बेला आफ्नो ओछ्यान नजिकै एक लोटा दूध भरेर राख्नुहोस् । त्यसपछि विहान उज्याले भएपछि बर र पिपलको फेदमा चढाउनुहोस् ।
दोस्रोमा हरेक सोमबार शिवलिङ्गमा काँचो दूध चढाउने, र भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नुभयो भने पनि यो समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
तेस्रोमा प्रत्येक विहीबारको दिन पनि नजिकै रहेको शिवलिङ्गमा हलेदोको डांठ चढाएमा पनि जीवनमा आर्थिक हानी नोक्सानीबाट बच्न सकिन्छ ।
चौथोमा हरेक शुक्रबार माता लक्ष्मीको पुजा आरधना गर्नुपर्छ ।
र अन्यमा प्रत्येक मंगलबार गणेश भगवान पूजा गरी १०८ पटक मन्त्र जप्यो भने पनि तपाईको जीवनमा हरेक पाइला पाइलामा आउने धन हानी नोक्सानीबाट बच्ने ज्योतिशी शास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
आफ्नै बुवासँग यौ.न सम्बन्ध राखेकि यी १९ बर्षिया युवतीको कारण यस्तो ! सुनेपछि सबै दङ्ग!